Zimbabwe: EU Hints on Renewed Sanctions Following Army Killings - allAfrica.com
Govt deploys army to guard buses carrying passengers (file photo).
ZIMBABWE'S unrepentant government faces renewed European Union (EU) sanctions in the wake of recent army killings and claims of rape, among some serious rights violations pinned on the Emmerson Mnangagwa led administration.
According to the resolutions, the EU parliament, "calls on the European Council to review its restrictive measures against individuals and entities in Zimbabwe, including those measures currently suspended, in the light of accountability for recent state violence."
In the EU parliament resolutions, the bloc was also called upon to "step up its political dialogue with Zimbabwe on human rights on the basis of Article 8 of the Cotonou Agreement" condemning the use of force by the state and violence by other actors.
"... Underlines its unanimous desire for Zimbabwe to become a peaceful, democratic and prosperous nation in which all citizens are treated well and equally under the law and where the organs of the state act on behalf of the citizens and not against them.
"Strongly condemns the violence that occurred during the recent protests in Zimbabwe; firmly believes that peaceful protest is part of a democratic process and that excessive force in response must be avoided in all circumstances."
"No one is above the law. Any evidence of rogue police officers or soldiers taking the law into their own hands will be dealt with and they will face the full wrath of the law," said Mnangagwa.
"Urges President Mnangagwa to remain true to his inaugural promises, to move rapidly to take control of the situation and to put Zimbabwe back on a path of reconciliation and respect for democracy and the rule of law," said the EU group.